Kulanka Djabouti 2 wuxuu noqon doonaa mid adag oo jilbaha la isku aasto!!! Ma jirto is-makeeki iyo meel dambe oo lagu gabbadaa!!!
Monday March 05, 2018 - 12:32:24 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Sida aynu warbaahinta ka dhegaysannay, xukuumadda Somaliland ayaa xaqiijisay in dhawaan mar kale dib loo ambaqaadayo
wada-hadaladii muddada dheer hakadku galay. Waxayna caddaysay in ergada labada dhinac ee ka qeyb galaysa wada-xaajoodka u horreeya ay kala hoggaamin doonaan Madaxweyne Muuse Biixi iyo dhiggiisa Farmaajo. Waxana la isla gartay in kulanka koowaad ee wada-hadalka lagu furayo dalka Djabouti, kaas oo ahaa dalab ka yimid xagga Somaliya isla markaan Somaliland ay aqbashay soo jeedintaa oo ah in mar labaad Djabouti ay gogosha fidiso.